Raspberry Pi 400: komputa yakazara pane keyboard | Mahara emahara
Raspberry Pi 400: komputa izere pane keyboard
Kana iwe uchirangarira mamwe emakomputa engano emakumi emakore apfuura, iwo anozivikanwa michina yeRetro yaive yakanyanya khibhodi pasi payo zvese zvaidikanwa zvemakomputa akazara zvakabatanidzwa. Iyo nyowani Raspberry Pi 400 Yakawanazve iyo yemazambiringa essence, asi neese matsva kufambira mberi kwazvino tekinoroji.
Kana iwe uchifarira zvekare zvekare senge yekutanga Apple, iyo BBC Micro, ZX Spectrum, Commodore, nezvimwe, ikozvino unogona kunakidzwa neiyo fomati. Ungofanire kuziva chimwe chinhu zvimwe nezve iyi yakakosha keyboard uye, nekudaro, ini ndinokukoka iwe kuti uenderere mberi kuverenga pamusoro peichi chishamiso chikuru chingave chako pamutengo wakanaka ...
1 Chii chinonzi Raspberry Pi 400?
Chii chinonzi Raspberry Pi 400?
Kana iwe uchida iyi SBC, unofanirwa Ziva kuziva Raspberry Pi 400. Rimwe remabasa akakosha zvikuru akagadzirwa nenheyo iyi. Nayo unogona kuve nekomputa yakazara iyo iwe yaunongofanirwa kubatanidza kune skrini kuti uwane iyo yakakwana michina iyo yekutanga nayo kunakidzwa neese aripo anoshanda masisitimu.
Raspberry Pi 400 zvakanyanyisa ndizvo compact khibhodi iyo ine zvese zvakavanzika Hardware pasi pekiyi pani. Uye zvakare, pane imwe yemahombekombe ayo iwe unowana ese madoko uye slots anowanikwa kuti abatanidze ese mahedheni, memori makadhi, nezvimwe.
Este itsva kit fomati inoshanda, sezvo ichiwedzera chinoshanda kune yako Rasbperry Pi bhodhi kuti kana iwe ukaitenga mune yakajairwa fomati iwe unongowana chete PCB, asi uchafanirwa kutenga yakasarudzika kesi kuti uichengetedze, keyboard, mbeva, nezvimwe. Mune ino kesi haina kudaro, iwe unotova nekhibhodi uye kesi, pamwe neSBC, zvese mune chimwe chigadzirwa.
Kana iwe uri kushamisika kuti chii ichi Raspberry Pi 400 inochengeta, chokwadi ndechekuti iyo hunyanzvi hunhu ivo vakanaka kwazvo. Ichokwadi kuti hausi kuzotora Hardware ine simba senge neCompute Module, kana ne shanduro dzakasimba kwazvo dzeRaspberry Pi 4, asi zvinopfuura zvakakwana kune vazhinji vashandisi uye mapurojekiti.
Kana zvakadaro ruzivo zvauri kumirira ndezvi:
Mugadziri: Raspberry Pi Foundation
SoC: Broadcom ARM 1.8Ghz Quad Core. Inosanganisira yakakwana GPU ye4K vhidhiyo uye 60FPS.
RAM ndangariro: 4GB DDR
Kubatana uye zviteshi: WiFi 5, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), USB 2.0, USB 3.0 uye USB-C yekuchaja, microSD slot, microHDMI, uye zvakajairwa GPIOs.
keyboard- Inosanganisira compact keyboard inoyeuchidza iyo Apple Magic Kibhodi dhizaini
Extras: inosanganisira yekutanga gwara, mbeva yepamutemo inosanganisirwa kit, HDMI-microHDMI adapter, magetsi adapter, uye MicroSD kadhi ine Raspberry Pi OS.
Mamwe mashoko - Raspberry Pi 400
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Raspberry Pi 400: komputa izere pane keyboard
Mutemo waOmm: zvese zvaunoda kuti uzive
MaaxBoard Mini: yakanaka imwe nzira yeRaspberry Pi 4